24.11.19 Avyakt Bapdada Nepali Murli 12.03.85 Om Shanti Madhuban
आज सत बाबा, सत शिक्षक, सद्गुरुले आफ्ना सत्यताका स्वरूप बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सत्य ज्ञान अथवा सत्यताको शक्ति कति महान छ, त्यसको अनुभवी आत्मा छौ। सबै दूर देशवासी बच्चाहरू भिन्न धर्म, भिन्न मान्यता, भिन्न रीति रसममा रहेर पनि यो ईश्वरीय विश्व विद्यालयतर्फ अथवा राजयोगतर्फ कसरी आकर्षित भयौ? सत्य बाबाको सत्य परिचय मिल्यो अर्थात् सत्य ज्ञान मिल्यो, सच्चा परिवार मिल्यो, सच्चा स्नेह मिल्यो र सच्चा प्राप्तिको अनुभव भयो। त्यसैले सत्यताको शक्तिको पछाडि आकर्षित भएका हौ। जीवन थियो, प्राप्ति पनि थियो यथा शक्ति ज्ञान पनि थियो तर सत्य ज्ञान थिएन त्यसैले सत्यताको शक्तिले सत्य बाबाको बनाइदियो।
सत शब्दको दुई अर्थ हुन्छ– सत, सत्य पनि हो र सत अविनाशी पनि हो। सत्यताको शक्ति पनि अविनाशी छ, त्यसैले अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी सम्बन्ध, अविनाशी स्नेह र अविनाशी परिवार छ। यही परिवार २१ जन्मसम्म भिन्न-भिन्न नाम रूपले मिलिरहन्छ। तर थाहा हुँदैन। अहिले थाहा छ– हामी नै भिन्न-भिन्न सम्बन्धले परिवारमा आइरहने छौं। यो अविनाशी प्राप्तिले, पहिचानले दूर देशमा भएर पनि आफ्नो सत्य परिवार, सत्य बाबा, सत्य ज्ञानतर्फ खिँचियौ। जहाँ सत्यता पनि होस् र अविनाशी पनि होस्, त्यही परमात्म पहिचान हो। जसरी तिमीहरू सबै यही विशेषताको आधारले आकर्षित भयौ, त्यसैगरी सत्यताको शक्तिलाई, सत्य ज्ञानलाई विश्वमा प्रत्यक्ष गर्नु छ। ५० वर्ष धरनी बनायौ, स्नेहमा ल्यायौ, सम्पर्कमा ल्यायौ। राजयोगको आकर्षणमा ल्यायौ, शान्तिको अनुभवले आकर्षणमा ल्यायौ अब बाँकी के रह्यो? जसरी परमात्मा एक हुनुहुन्छ भन्ने यो सबै अनेक धर्मालम्बीको मान्यता छ, त्यसैगरी यथार्थमा सत्य ज्ञान एक बाबाको हो अथवा एउटै मार्ग यो छ– यो आवाज जबसम्म सशक्त हुँदैन, तबसम्म आत्माहरूको अनेक स-साना सहारातर्फ भट्किन पनि बन्द हुँदैन। अहिलेसम्म यही सम्झन्छन्– यो पनि एक मार्ग हो। राम्रो मार्ग छ। तर आखिर एक बाबाको एउटै परिचय छ, एउटै मार्ग छ। अनेकताको यो अन्योल समाप्त हुनु नै विश्व शान्तिको आधार हुने छ। यो सत्यताको परिचयको वा सत्य ज्ञानको शक्तिको लहर जबसम्म चारैतिर फैलिँदैन, तबसम्म प्रत्यक्षताको झण्डा मुनि सर्व आत्माहरूले सहारा लिन सक्ने छैनन्। गोल्डन जुबलीमा जबकि बाबाको घरमा विशेष निमन्त्रणा दिएर बोलाउँछौ, जहाँ आफ्नो स्टेज हुन्छ, श्रेष्ठ वातावरण हुन्छ, स्वच्छ बुद्धिको प्रभाव हुन्छ, स्नेहको धरनी हुन्छ, पवित्र पालना हुन्छ। यस्तो वायुमण्डलको बीचमा आफ्नो सत्य ज्ञानलाई प्रसिद्ध गरेमा प्रत्यक्षताको आरम्भ हुनेछ। याद छ– जब प्रदर्शनीद्वारा सेवाको विशाल मार्गको आरम्भ भएको थियो त्यतिबेला के गरिन्थ्यो? मुख्य ज्ञानका प्रश्नहरूको फाराम भराइन्थ्यो नि। परमात्मा सर्वव्यापी हो वा होइन। गीताका भगवान् को हो? यस्तो फाराम भराइन्थ्यो नि। आफ्नो विचार लेखाइन्थ्यो, मतलब सोधिन्थ्यो। पहिला यो आरम्भ गरियो तर चल्दा-चल्दै यी कुरालाई गुप्त रूप दिएर फेरि स्नेहले सम्पर्क राख्ने कुरालाई अगाडि ल्याएर समीप ल्याउन थालियो। यसपटक जब यस धरनीमा आउँछन् अनि सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय देऊ। यो पनि राम्रो हो, यो राजी हुने कुरा हो। तर एक बाबाको एक यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धिमा आओस्– यसको पनि समय अब ल्याउनु छ। केवल सीधै भन्छौ– बाबाले यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ तर, के यो मानेर जान्छन्त, यही परमात्म ज्ञान हो? परमात्माको कर्तव्य चलिरहेको छ? ज्ञानको नवीनता छ– यस्तो अनुभव गर्छन्? यस्तो वर्कसप कहिल्यै राखेका छौ– जसमा परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, एक पटक मात्रै आउनुहुन्छ वा पटक-पटक आउनुहुन्छ? यस्तो स्पष्ट परिचय उनीहरूलाई मिलोस्। यस्तो सम्झिऊन्– दुनियाँमा जुन सुनिएको थिएन, त्यो यहाँ सुनियो। यसरी जो वक्ता बनेर आएका हुन्छन् उनीहरूसँग यो ज्ञानको रहस्यको रूह-रिहान गर्नाले उनीहरूको बुद्धिमा आउने छ। साथ-साथै जुन भाषण गर्छौ त्यसमा पनि आफ्नो अनुभव सुनाएर एक-एक वक्ताले एक-एक नयाँ ज्ञानको कुरालाई स्पष्ट गर्न सक्छौ। तर यसरी सीधै विषय नराख्नु– परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्न भनेर तर एक बाबालाई एक रूपमा जान्नाले के-के विशेष प्राप्तिहरू भए, ती प्राप्तिहरूलाई सुनाउँदै सर्वव्यापीको कुरालाई स्पष्ट गर्न सक्छौ। एक परमधाम निवासी हुनुहुन्छ भन्ने जानेर याद गर्नाले बुद्धि कसरी एकाग्र हुन्छ अथवा बाबाको सम्बन्धले के प्राप्ति भएको अनुभूति हुन्छ? यो ढंगले सत्यता र निर्मानता दुवै रूपले सिद्ध गर्न सक्छौ, जसबाट अभिमान पनि नलागोस् यिनीहरूले आफ्नो महिमा गर्दैछन् भनेर। नम्रता र दयाको भावनाले अभिमानको महसुसता गराउँदैन। जसरी मुरली सुनेर कसैले पनि अभिमान देखायो, भन्दैनन्। अधिकारले बोल्छन्, बरू यस्तो भन्छन्। शब्द जति नै कडा होस् तर अभिमान देखायो भन्दैनन्। अधिकार भएको अनुभूति गर्छन्। यस्तो किन हुन्छ? जति अधिकार हुन्छ त्यति नै नम्रता र दया भाव पनि हुनुपर्छ। त्यसो त बाबा बच्चाहरूको अगाडि बोल्नुहुन्छ तर तिमीहरू सबैले यस विषेशताले स्टेजमा यस विधिले स्पष्ट गर्न सक्छौ। जसरी सुनाएँ नि त्यसैगरी एउटाले सर्वव्यापीको कुरा राख्नु, अर्कोले नाम रूपबाट न्याराको राख्नु, तेस्रोले ड्रामाको प्वाइन्ट बुद्धिमा राख्नु। आत्माका नयाँ विशेषताहरूलाई बुद्धिमा राख्नु। जुन पनि विशेष विषय छन्, तिनीहरूलाई लक्ष्यमा राखेर अनुभव र प्राप्तिको आधारले स्पष्ट गर्दै जानु जसबाट सम्झिऊन्– यो सत्य ज्ञानबाट नै सत्ययुगको स्थापना भइरहेको छ। भगवानुवाच विशेष छ जुन भगवान सिवाय कसैले सुनाउन सक्दैन। विशेष स्लोगन जसलाई तिमीहरूले स्पष्ट शब्दमा भन्छौ– जस्तै मनुष्य, मनुष्यको कहिल्यै सद्गुरु, सतबाप बन्न सक्दैन। मनुष्य परमात्मा हुन सक्दैन। यस्ता विशेष प्वाइन्ट्हरू जुन समय-समयमा सुन्दै आएका छौ, त्यसको रूपरेखा बनाऊ। जसबाट सत्य ज्ञान स्पष्ट होस्। नयाँ दुनियाँको लागि यो नयाँ ज्ञान हो। नवीनता र सत्यता दुवै अनुभव होस्। जस्तै सम्मेलन गर्छौ र सेवा धेरै राम्रो चल्छ। सम्मेलनपछि जे जति साधन बनाउँछौ, कहिले चार्ट, कहिले के बनाउँछौ, ती पनि साधन बन्छन् सम्पर्कलाई अगाडि बढाउनको लागि। यस्ता साधन पनि राम्रो हुन्छ किनकि मौका मिल्छ पछि भेटघाट गर्नको लागि। तर जसरी अहिले जति पनि आउँछन्, भन्छन्– हो, यो धेरै राम्रो कुरा हो। योजना राम्रो छ, चार्ट राम्रो छ, सेवाका साधन पनि राम्रा छन्। तर अब यो भनेर जाऊन्– नयाँ ज्ञान आज स्पष्ट भयो। यस्ता विशेष ५/६ जना पनि तयार गर्यौ भने... किनकि सबैको बीचमा यो कुराकानी चल्न सक्दैन। तर जो विशेष आउँछन्, टिकट दिएर ल्याएको हुन्छ। विशेष पालना पनि मिलेको हुन्छ, त्यस्ता मध्यबाट जति पनि नाम चलेका छन् तिनीहरूसँग यो बातचित गरेर स्पष्टसँग तिनीहरूको बुद्धिमा पार्न आवश्यक छ। यस्तो कुनै योजना बनाऊ जसबाट तिनीहरूलाई यो नलागोस्– यिनीहरूलाई आफ्नो नशा धेरै छ, तर सत्यता लागोस्। यसलाई भनिन्छ तीर पनि लागोस् तर पीडा नहोस्। दिक्क नमानुन्। खुशीले नाचुन्। भाषणको रूपरेखा पनि नयाँ बनाऊ। विश्व शान्तिको भाषण पनि धेरै गर्यौ। आध्यात्मिकताको आवश्यकता छ, आध्यात्मिक शक्ति विना केही हुन सक्दैन। यो त पत्रिकामा आउँछ तर आध्यात्मिक शक्ति के हो? आध्यामिक ज्ञान के हो? यसको दाता को हो? अझै त्यहाँसम्म पुगेका छैनन्। बुझून्– भगवानको कार्य चलिरहेको छ। अहिले भन्छन्– माताहरूले धेरै राम्रो कार्य गरिरहेका छन्। समय प्रमाण यो पनि धरनी बनाउनु पर्छ। जसरी सन सोज फादर हुन्छ, त्यस्तै फादर सोज सन पनि हुन्छ। अहिले त्यही फादर सोज सन भइरहेको छ। त्यसैले यो बुलन्द आवाजले प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउने छ। बुझ्यौ!
गोल्डन जुबलीमा के गर्नु छ, यो त बुझ्यौ नि! अरू स्थानमा फेरि पनि वातावरण हेर्न पर्ने हुन्छ तर बाबाको घरमा, आफ्नो घर छ, आफ्नो स्टेज छ त्यसैले यस्तो स्थानमा यो प्रत्यक्षताको आवाजलाई सशक्त गर्न सक्छौ। यसरी थोरै पनि यो कुरामा निश्चय बुद्धि भए भने तिनीहरूले नै आवाज फैलाउने छन्। अहिले रिजल्ट कस्तो छ? सम्पर्क र स्नेहमा स्वयं आऊन्, यो सेवा नै गरिरहेका छौ। अरूलाई पनि स्नेह र सम्पर्कमा ल्याइरहेका छौ। जति स्वयं बन्छन् त्यति सेवा गर्नेछन्। यसलाई पनि सफलता नै भनिन्छ नि। तर अझै अगाडि बढ्नु छ। नाम बदनाम भएर सशक्त भएको छ। पहिला डराउँथे, अहिले आउन चाहन्छन्। यो त फरक भयो नि। पहिला नाम सुन्न चाहदैनथे, अहिले नाम लिने इच्छा राख्छन्। यो पनि ५० वर्षमा प्राप्त भएको सफलता हो। धरनी बनाउनमा नै समय लाग्छ। यस्तो न सम्झ– ५० वर्ष यसैमा लाग्यो भने फेरि अरू के होला? पहिला धरनीलाई हलो चलाउन योग्य बनाउन समय त लाग्छ। बीज रोप्न समय लाग्दैन। शक्तिशाली बीजको फल शक्तिशाली निक्लन्छ। अहिलेसम्म जे भयो त्यो हुनु नै थियो। त्यो नै यथार्थ हो। बुझ्यौ!
(विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर) यी चात्रक असल छन्। ब्रह्मा बाबाले धेरै समयको आह्वान पश्चात् तिमीहरूलाई जन्म दिनु भएको हो। विशेष आह्वानले पैदा भएका हौ। ढिलो अवश्य भयो तर स्वस्थ र राम्रा पैदा भएका छौ। बाबाको आवाज पुग्दै थियो तर समय आए पछि समीप आयौ। विशेष ब्रह्मा बाबा खुशी हुनुहुन्छ। बाबा खुशी भए पछि बच्चाहरू पनि खुशी हुन्छन् नै तर विशेष ब्रह्मा बाबाको स्नेह छ त्यसैले धेरैजसोले ब्रह्मा बाबालाई नदेखेर पनि यस्तो अनुभव गर्दैछन् मानौं देखेका थिए। चित्रमा पनि चैतन्यताको अनुभव गर्छौ। यो विशेषता हो। ब्रह्मा बाबाको स्नेहको विशेष सहयोग तिमी आत्माहरूलाई छ। भारतवासीले प्रश्न गर्छन् ब्रह्मा नै किन, यिनै किन?... तर विदेशी बच्चाहरू आउँछन् नै ब्रह्मा बाबाको आकर्षणले। स्नेहले बाँधिन्छन्। यो विशेष सहयोगको वरदान हो। त्यसैले नदेखेर पनि धेरै पालनाको अनुभव गर्छौ। भित्रैदेखि भन्छौ– ब्रह्मा बाबा। यो विशेष सूक्ष्म स्नेहको सम्बन्ध हो। यस्तो होइन– बाबाले सोच्नुहुन्छ यिनीहरू म अव्यक्त भएपछि कसरी आए! न तिमीहरूले सोच्छौ, न ब्रह्माले सोच्नुहुन्छ। अगाडि नै छ। आकार रूपले पनि साकार समान नै पालना दिइरहनु भएको छ। यस्तो अनुभव गर्छौ नि! थोरै समयमा कति राम्रा टिचरहरू तयार भएका छन्! विदेशमा सेवा भएको कति समय भयो? कति टिचर तयार भएका छन्? राम्रो छ, बापदादाले बच्चाहरूको सेवाको लगन हेरिरहनु हुन्छ किनकि विशेष सूक्ष्म पालना मिलिरहन्छ नि। जसरी ब्रह्मा बाबाको विशेष संस्कार के देख्यो? सेवा विना रहन सक्नु हुन्थ्यो? त्यसैले विदेशमा दूर रहनेहरूलाई यो विशेष पालनाको सहयोग भएको कारणले सेवाको उमंग धेरै रहन्छ।
गोल्डन जुबलीमा अरू के गरेका छौ? स्वयं पनि गोल्डन र जुबली पनि गोल्डन। राम्रो छ, सन्तुलनको ध्यान अवश्य राख्नु। स्वयं र सेवा। स्व उन्नति र सेवाको उन्नति। सन्तुलन राख्नाले अनेक आत्माहरूलाई स्व सहित आशीर्वाद दिलाउन निमित्त बन्छौ। बुझ्यौ! सेवाको योजना बनाउँदा पहिला स्व-स्थितिमा ध्यान पुर्यायौ भने मात्र योजनामा शक्ति भरिन्छ। योजना हो बीज। त्यसैले बीजमा यदि शक्ति भएन भने, शक्तिशाली बीज छैन भने जतिसुकै मेहनत गर श्रेष्ठ फल दिँदैन। त्यसैले योजनाको साथमा स्व-स्थितिको शक्ति पनि अवश्य भरिरहनु छ। बुझ्यौ! अच्छा!
यस्ता सत्यतालाई प्रत्यक्ष गर्ने, सदा सत्यता र निर्माणताको सन्तुलन राख्ने, हरेक बोलीद्वारा एक बाबाको परिचयलाई सिद्ध गर्ने, सदा स्व-उन्नतिद्वारा सफलता प्राप्त गर्ने, सेवामा बाबाको प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउने, यस्ता सद्गुरुका, सत बाबाका सत बच्चाहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
विदाईको समयमा दादीजीले भोपाल जाने छुट्टी लिँदै हुनुहुन्छ:–
जाँदामा पनि सेवा छ रहँदा पनि सेवा छ। सेवाको निमित्त बनेका बच्चाहरूको हर संकल्पमा, हर सेकेण्डमा सेवा हुन्छ। तिमीलाई देखेर जति उमंग-उत्साह बढ्छ त्यति नै बाबालाई याद गर्छन्। सेवामा अगाडि बढ्छन्, त्यसैले सफलता सदा साथ रहेकै हुन्छ। बाबालाई पनि साथमा लिएर जाँदैछौ, सफलतालाई पनि साथमा लिएर जाँदैछौ। जुन स्थानमा जान्छौ, त्यहाँ सफलता हुन्छ। (मोहिनी बहिनीसँग) चक्कर लगाउन गइरहेकी छौ। चक्कर लगाउनु अर्थात् अनेक आत्माहरूलाई स्व-उन्नतिको सहयोग दिनु। साथ-साथै जब स्टेजको मौका मिल्छ, त्यतिबेला यस्तो नयाँ भाषण गरेर आउनु। पहिला तिमीले सुरु गरिदेऊ, तब नम्बरवन हुनेछ। जहाँ गए पनि सबैले के भन्छन्? बापदादाको याद-प्यार ल्याउनु भएको छ? त्यसैले जसरी बापदादाले स्नेह र सहयोगको शक्ति दिनुहुन्छ त्यसैगरी तिमीले पनि बाबाबाट लिएको स्नेह र सहयोगको शक्ति दिँदै जानु। सबैलाई उमंग-उत्साहमा उडाउनको लागि कुनै न कुनै त्यस्तै उखान-टुक्का भनिरहनु। सबै खुशीले नाचिरहने छन्। रूहानियतको खुशीमा सबैलाई नचाउनु र रमणीकताले सबैलाई खुशी-खुशीले पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न सिकाउनु। अच्छा।
स्वको चक्रलाई जानेर ज्ञानी आत्मा बन्ने प्रभु प्रिय भव
आत्माको यस सृष्टि चक्रमा के-के पार्ट छ, त्यसलाई जान्नु नै स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु हो। पूरा चक्रको ज्ञानलाई बुद्धिमा यथार्थ रीति धारण गर्नु नै स्वदर्शन चक्र चलाउनु हो, स्वको चक्रलाई जान्नु नै ज्ञानी आत्मा बन्नु हो। यस्ता ज्ञानी आत्मा नै प्रभु प्रिय हुन्छन्, तिनीहरूको अगाडि माया टिक्न सक्दैन। यो स्वदर्शन चक्रले नै भविष्यमा चक्रवर्ती राजा बनाइदिन्छ।
हरेक बच्चा बाबा समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन्यौ भने प्रजा पनि चाँडै तयार हुनेछन्।
सूचना:– आज अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस हो। सबैले संगठित रूपमा साँझ ६.३० देखि ७.३० सम्म साक्षात्कारमूर्त बनेर आफ्नो दिव्य स्वरूपको अनुभव गर्दै सबैलाई गराउनु हुने छ।